ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း ဒေဝါလီမခံရအောင် အကြွေးပြင်ဆပ်ခွင့်ပြု
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း ဒေဝါလီမခံရအောင် အကြွေးပြင်ဆပ...
19 พ.ค. 2563 - 22:44 น.
အရှုံးပေါ်နေတဲ့ ထိုင်းအဲဝေး လေကြောင်းလိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် ထိုင်းအစိုးရက အကြွေးပြင်ဆင်ဆပ်ခွင့် ပြုလိုက်ပါတယ်။
အကြွေးနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းက သူ့ကုမ္ပဏီမပြုတ်ဖို့ အစိုးရ ထောက်ပံ့ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၈၁ ဘီလျံတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရကတော့ ထောက်ပံ့ကြေးထုတ်ကယ်ဆယ်မယ့်အစား အကြွေးဆပ်မယ့်ပုံစံကို ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ဒေဝါလီခံရမယ့်အဖြစ်က ရှောင်ကွင်းဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် တိုးတက်များပြားနေချိန်မှာ ခရီးသွားလာမှုတွေကို ပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက လေကြောင်းလုပ်ငန်းတွေ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
ထိုင်းအဲဝေးလေကြောင်းလိုင်းကတော့ ကိုရိုနာ မတိုင်ခင်ကတည်းက ခရီးသည်အရေအတွက် ယုတ်လျော့ကျဆင်းနေလို့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့နေရပြီးသားပါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းလေကြောင်းဟာ ဘတ်ငွေ ၁၂ ဘီလျံ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းကတော့ သူတို့ဒေဝါလီခံဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားဟာ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလျှောက်ထားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးလို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ အစုရှယ်ယာ ၅၁ ရာနှုန်းကို အစိုးရက ပိုင်ပြီး အစိုးရလုပ်ငန်း မူဝါဒရေးရာကော်မတီက ကြီးကြပ်ပါတယ်။
“အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ပြီးနောက် ထိုင်းအဲဝေး ဒေဝါလီမခံရဖို့အတွက် အကြွေးဆပ်ပုံဆပ်နည်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ သဘောထား ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း အလုပ်ဆက်လုပ်မှာပါ”လို့ အင်္ဂါနေ့ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ၀န်ကြီးချုပ် ပရာယုချန်အိုချာက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းက ပထမတင်တဲ့ အဆိုပြုလွှာက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆီက အစိုးရ ချေးငွေ ထုတ်ပေးဖို့ ပါဝင် ပါတယ်။
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းမှာ လေယာဉ်ပေါင်း အစင်း ၈၀ ရှိပြီးဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၂၀၀၀ ရှိပါတယ်။ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်တွေကို ပျံသန်းဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ လေကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမယ် မထင်တဲ့အတွက် လေကြောင်းခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ အကျပ်အတည်း ပိုတွေ့ရလိမ့်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုလံဘီယာ အမျိုးသားအလံတင် အေဗီယန်ကာ ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းကတော့ဥပဒေ ပုဒ်မ အခန်း ၁၁ နဲ့အညီ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီလမှာပဲ ဒေဝါလီလျှောက်ထားလိုက်ပါပြီ။ သြစတြေးလျရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးလေကြောင်း ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဗားဂျင်း လေကြောင်းလိုင်းဟာလည်း ဧပြီလတုန်းက အစိုးရရဲ့ ကယ်ဆယ်ငွေ လျှောက်ထားရာမှာ မရရှိခဲ့တဲ့ အတွက် ကြွေးမြီဥပဒေအရ ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း ဒေဝါလီမခံရအောင် အကြွေးပြင်ဆပ်ခွင့်ပြု